Maatiin Ameerikaa ilmasaanii kan dargaggeessaa waggaa 30 himachaa jiru - BBC News Afaan Oromoo
Maayikil Rotondo wayita guyyaa Facaasaa mana murtiitti dhiyaateetti
Ilmi dhiiraa waggaa meeqaan booda maatii biraa bahuun masa mataasaa dhaabachu qaba jettu?
Niyoorkiitti garuu dargaggeessi umurii waggaa 30 tokko maatii biraa bahuuf didnaan mana murtiitti himannaan maatiidhuma isaatiin irratti banamu dhagahame.
Yaaliin abbaafi haatii gurbichaa akka ofi danda'uun jireenya mataasaa ogganatuuf taasisaa turan bu'aa hinfinne. Filannoon dhumaas mana murtiitti himannaa irratti banuu waan tureef, garaa jabaachuun kana raawwataniiru.
Ilmi isaanii umurii waggaa 30 gutuulleen ammas maatiidhuma waliin jiraachuu filata.
Akka galmeen mana murtichaa agarsiisuutti, ilmi waggaa 30 kun kiraa manaa hinkanfalu. Kana malees hojii mana keessaa salphaalleen hingargaaru. Maatiinsaa akka ofii danda'uuf jecha deeggarsa maallaqaa taasisaniifis tole hinjenne.
Haatiisaa Aaddee Kiristiifi abbaan isaa Obbo Maark Rotondoo akka jedhanitti, ilmi isaanii mana isaanii dhiisuun akka ofi danda'uus jecha yeroo garaa garaa shan xalayaa akkeekkachiisaa kennaniifiiru.
Maayik garuu mana akkan gadhi dhiisuuf yeroo gahaan naaf hinkennamne jedha.
Maatiin ilmasaanii mana murtii bulchinsa Onondanatti himatan kunneenis erga ilmisaanii akka of danda'uuf yaalii hunda taasisaniin booda dadhabnaan gara mana murtiitti qajeelusaanii dubbatama.
''Nuti abbaafi haatiisaas akka ilmi keenya mana keenya atatamaan gadhiisee bahu murtesineera,'' jedha xalayaan jalqabaa baatii Guraandhalaa barraa'ee.
Erga ilmisaanii xalayaa kana tufachuun dhiiseen boodas, maatiin xalayaan gara biraa karaa abukaatoon akka isa dhaqabu taasisaniiru.
''Ilma keenya! Kanaan booda mana kanaa harii'atamtee jirta,'' jedha xalayaan Guraandhala 13 mallattoo haadha isaatiin bahe kan biraa. Kan raawwachu yoo baatees seeraan akka gaafatamu illeen itti dabalamee ture.
Mana jireenyaa maatii Maayikil Rotondoo
Maatiinis anatti aansuun akka ilmiisaanii ofi danda'uu jecha doolaara 1,100 kan kennaniif yoo ta'u, ilmi garuu maallaqicha fudhachuuf illeen fedhii hinagarsiifne.
Isaan boodas maatiin baatii Eblaa keess gara mana murtii deemuun dhimmicha kan beeksiisan yoo ta'u, itti gaafatamtoonni mana galmee mana murtichaa Maayiki ilamasaanii waan ta'eef dhimmicha raawwachisuuf xalayaa mana murtii olaanaa irraa akka isaan barbaachisu itti himaniiru.
Ilamiisaan garuu himannaa kana ''miira haaloo kan qabuudha,'' jechuun tufateer, akka oduun WABC gabaaseetti.
Maatiin dhimmicha gara mana murtii olaanaatti geessuuf beelama qabataniiru. Wayita manni murtii olaanaa dhimmicha ilaaluttis, ilmisaani Maayiki waggaa 31 guutuuf jira.